မွေးကင်းစကလေး – BurmeseHearts
မွေးကင်းစကလေးအတွက် အကောင်းဆုံး အစာအာဟာရဟာဘာလဲ? မိခင်နို့ဟာ ကလေးတွေအတွက် ဘာကြောင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်သလဲ? ဘာကြောင့် မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တွေကို နှစ်နာရီခြားတစ်ခါဆိုသလို နို့တိုက်ကျွေးရတာလဲ? နှစ်နာရီပြည့်လို့ နို့တိုက်ရမယ့်အချိန် ကလေးအိပ်ပျော်နေရင် မတိုက်ဘဲထားသင့်သလား? နို့တိုက်ပုံတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ နို့တိုက်ကျွေးပုံက ဘယ်လိုလဲ? မွေးကင်းစကလေးကို အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်တဲ့ ပေါင်ဒါတို့ သနပ်ခါးတို့ သုံးပေး ၊ လမ်းပေးသင့်သလား? ဘာကြောင့် မွေးကင်းစကလေးကို အမွှေးနံ့သာတွေ ရှောင်သုံးသင့်သလဲ? ကလေးကို မဖြစ်မနေ ပေါင်ဒါသုံးမှဖြစ်မယ်ဆို ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ? ကလေးခါးတောင်းကျိုက် (Diaper) သုံးတဲ့မိဘတွေ ဘာသတိထားသင့်သလဲ? ကလေးကိုယ်ပေါ်က ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုအထွေထွေကို စစ်ဆေးဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်က ဘယ်အချိန်လဲ? မွေးကင်းစကလေးရဲ့ ဦးထိပ်က ဦးရေပြားဟာ ဘာကြောင့် ပျော့စိစိဖြစ်နေသလဲ? မွေးကင်းစကလေးရဲ့ ဦးထိပ်က ဦးရေပြားကို ဘာကြောင့် ဂရုစိုက်သင့်သလဲ? မွေးကင်းစကလေးရဲ့ ခြေ ၊ လက်တွေဟာ ဘာကြောင့် မဖြောင့်သေးတာလဲ? ကလေးရဲ့ မဖြောင့်သေးတဲ့ ခြေ ၊ လက်တွေဟာ ဘယ်တော့ ပြန်ဖြောင့်လာနိုင်သလဲ? မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေ ဘယ်နှစ်ကြိမ် နို့စို့တတ်သလဲ? မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေ ဘာကြောင့်ငိုရတယ်? ကလေးငိုနေရင် အမြန်ဆုံး အငိုတိတ်အောင် ဘာလုပ်ပေးသင့်သလဲ? ချိုလိမ်ကို ဘယ်အချိန်က စသုံးသင့်သလဲ? နေ့မစေ့ ၊ လမစေ့ စောမွေးလာတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအမှန်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
မွေးကင်းစကလေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ CHAT Room မှာ ဝိုင်းဆွေးနွေးမယ်။
ပြီးရင် မွေးကင်းစကလေး နဲ့ပတ်သက်လို့ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးဖို့ ဒီပေ့ခ်ျကို ပြန်လာရပါမယ်။